Somaliland Oo Taageertay In Cuno Qabateynta Hubka Lagu Sii Kordhiyo Somaliya , Qaramada Midoobey-na Amaantey | Caroog News
Somaliland Oo Taageertay In Cuno Qabateynta Hubka Lagu Sii Kordhiyo Somaliya , Qaramada Midoobey-na Amaantey
Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku bogaadisey xubnaha Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobay qaraarkii ay ku cusboonaysiiyeen cuno-qabatayntii hubka ee saarnayd Soomaaliya 14kii Bishan November.
Sidaasna waxa lagu bayaamiyey war-murtiyeed maanta ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah JSL , waxaanay dowladda JSL eedaysay Soomaaliya in aanay siyaasad ahaan iyo amni ahaan awood u lahayn inay xafido Hubka iyo Rasaasta, sida ku cad Warbixin Golaha Ammaanka la horgeeyey 9kii bishan November oo qiraysa in aanay Soomaaliya tahli karin inay hanato hubka iyo saanada ciidammada.
Xukuumadda Somaliland waxay ku ammaantay Golaha Ammaanka Qarammada Midoobay tallaabada ay ku sii adkeeyeen cunaqabatayntii hubka ee saarnayd Soomaaliya.
Xukuumadda Somaliland waxay xaqiijisay inay aaminsan tahay in hub kasta oo la siiyo Soomaaliya uu halis ku yahay JSL, dalalka jaarka iyo ammniga adduunkaba.
Xukuumadda Somaliland waxay intaas ku dartay inay si xoog leh u cambaareynayso dalalka hubka siiya Soomaaliya, Iyadoo hubka la siiyaa uu aakhirka ku dambeeyo gacanta kooxaha argagixisada iyo maleeshiyo beeleedyada Soomaaliya.
Dowladda Somaliland waxay ku boorisay beesha caalamka, gaar ahaan Golaha Ammaanka Qarammada midoobay inay sii wadaan cunaqabataynta hubka Soomaaliya oo xoojinaysa wadajirka nabadgelyada mandaqada iyo ammaanka caalamkaba.
Xukuumadda Somaliland waxa kaloo ay soo dhaweysay heshiiska nabadeed ee dalalka Itoobiya iyo Ereteriya iyo murankii dhinaca xudduudaha ee u dhexeeyay labadaas dal iyo furdaaminta khilaafka soohdimaha ee ka dhex oognaa illaa 2008dii Jabuuti iyo Ereteriya, waxaanay JSL ku baaqday in waanwaantaasi noqoto mid iskaashi u horseeda gobolka.
Xukuumadda Somaliland waxay ku guubaabisay Golaha Ammaanka Qarammada midoobay, urur-goboleedka IGAD, Midowga Afrika iyo xubnaha dalalka Qarammada midoobay in ay taageeraan sidii dib loogu bilaabi lahaa wada-hadalkii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya, oo ah mid faa’iido ugu jirto mandaqada iyo nabadgelyada caalamka.
Waxa kaloo warsaxaafadeedka wasaaradda Arrimaha dibadda Somaliland lagu sheegay in gobolka Geeska Afrika ay soo mareen heshiisyo la mid ah kuwa Somaliland iyo Soomaaliya; sida Itoobiya iyo Ereteriya iyo Suudaan iyo Koonfurta Suudaan.
Ugu dambayn, waxa war-murtiyeedka lagu sheegay in Somaliland kaalin ka geysatay xasiloonida mandaqada 27kii sannadood ee la soo dhaafay, waxaanay ku dooday inay wali la tacaalayso kooxaha argagixisada, kuwa dadka tahriibiya, waxaanay mudnaanta siinaysaa sidii gobolku iskaashi dhaqaale u gaadhi lahaa.